Raw Materials Chemical
<p>စက်ရုံးရှင်း Raw Materials Chemical ပစ္စည်းများကို 30 To 50 % အထူးလျော့ဈေးနဲ့ အသုံးလို့သည့် ပစ္စည်းများကို ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်။<br></p>
45000 ~ 45000 Kyats
-	Capable of deodorizing, color removal, bactericide and filtration of harmful impurities in water -	Ceramic Senior Completely remove impurities such as soil, sand, mud, rust and other impurities … harmful to your body -	The cartrigde filter mixed6floors -	Tap magnet to create water source full of energy, help protect the body against variety of diseases have healthy -	Mineral Stone contain many beneficial minerals for health, absorption of toxins.
ML 300အယ်လ်ကာလိုင်း ရေသန့်စက်
KDF media Smart Design Fexibleပိုက်နှင့်အတူအလတ်စားကာဗွန်ပိတ်ပင်တာားဆီးမှုfilter-filtering mediaပါရှိသည်။အပူချိန်အာရုံခံကိရိယာပါရှိပြီးmicrocomputerစောင့်ကြည့်စီးဆင်းမှုနှုန်းကိုAutomatic Self-သန့်ရှင်းရေးကိုလျပ်စစ်သုံးအခန်းထဲကစွမ်းဆောင်ရည်အမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုထိန်းသိမ်းထားပါသည်။သာလွန်အရည်အသွေးမြင့်ပလက်တီနမ်-တိုက်တေနီယမ်ကိုလျှပ်စစ်သုံးပြားသည်စက်မှုလုပ်ငန်းတွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီးSystemကိုshinsei ရေ၏အဆင့်မြင့်နည်းပညာနှင့်ionizerလုပ်ငန်းစဉ်မှတဆင့်စုံလင်သောပုံစံကိုထုတ်ပေးပါသည်။
PL 55 အယ်လ်ကာလိုင်းရေသန့်စက်
High power carbonပိတ်ပင်တားဆီးမှုfilterကိုထိရောက်သေးငယ်သောဇီဝသက်ရှိ(ဘက်တီးရီးယား၊ရေညှိ၊မှိုအပါအဝင်ရေညစ်ညမ်းမှုအများဆုံးလျှော့ချပေးလျက်ရှိပါသည်။shinseiTm ရေသောက်သုံးသူအတွက်ကျန်းမာရေးကောင်းသောအရသာရှိပြီးချက်ပြုတ်သောအခါတွင်လည်းကောင်း၊အလှအပနှင့်သန့်ရှင်းရေးစသည့်အမျိုးမျိုးသောရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။အဆင့်မြင့်နည်းပညာနှင့်ionizer processအစဉ်အလာမှကျန်းမာခြင်းတန်ဖိုးကိုပိုမိုကောင်းမွန်တိုးတက်စေပါသည်။
Reverse Osmosis နည်းပညာသုံးထားသော စားသောက်ဆိုင်သုံး၊ ကျောင်းသုံး ရေသန့်စက်များ (Water Purifiers)
&quot;ထူးခြားချက်များ&quot; စားသောက်ဆိုင်များ၊ ကျောင်းများ နှင့် အများပြည်သူ နှင့် သက်ဆိုင်သောနေရာများအတွက် ဘေးအန္တရာယ်ကင်း၍ သန့်စင်သည့် သောက်ရေသန့်အား တစ်နေ့လျှင် ဂါလံ (၃၀၀) ထိ ထုပ်လုပ်ပေးနိုင်ခြင်း။ ရေပူ ၊ ရေအေး နှင့် ရိုးရိုးရေ စသည်ဖြင့် ရေအမျိုးအစား (၃) မျိုးထုတ်လုပ်ပေးနိူင်ခြင်း။ အပူချိန်လွန်ကဲခြင်း ၊ Tank ထဲတွင် ရေလက်ကျန်မရှိတော့သည့် အခြေအနေများတွင် အလိုအလျောက် အပူချိန်ဖြတ်တောက်စနစ်ကို ထည့်သွင်းထားသည့် အတွက် လုံခြုံစိတ်ချရခြင်း။ RO Membrane သန့်စင်ခြင်းအတွက် Flush Valve တပ်ဆင်ထားခြင်း။ ကြာရှည်ခံနိုင်သည့် Stainless Steel အိမ်တစ်ခုပါဝင်ပြီး ရွေ့လျားနိုင်သည့် အခြေဖြင့် ခေတ်မီ ဒီဇိုင်းပါရှိခြင်း။ &quot;1- year &quot; အာမခံပါရှိခြင်း။ RO Water Purifiers Series E သည် Reverse Osmosis နည်းပညာကို အသုံးပြု၍ ဘေးန္တရာယ်ကင်းပြီး သန့်စင်သည့် သောက်ရေသန့်များကို ထုတ်လုပ်ပေးပါသည်။ အရည်အသွေးမြင့် စစ်ထုတ်ကိရိယာများဖြင့် ရေသန့်စင်သော အဆင့်(5)ဆင့်မှ (၆) ဆင့်အထိပါရှိပြီး ကလိုရင်း၊ အိုင်းရွန်းဓါတ်စင်များ၊ လေးလံသော သတ္တုများ၊ အဆိပ်သင့်ပစ္စည်းများ၊ ဘက်တီးရီးယားများနှင့် ဗိုင်းရပ်စ်များကို (၀.ဝဝဝ၁) မိုက်ခရွန်ထိ လျှော့ချပေးပြီး ၉၉%နှင့် အထက် ဖယ်ရှားပေး နိုင်ပါသည်။ Model E1 The Standard Use တစ်နေ့လျှင်ဂါလံ(၁၀၀) ထုတ်ပေးနိုင်ခြင်း။ ရေအေးနှင့် ရိုးရိုးရေ(၂)မျိုးရရှိခြင်း။ (၁)နှစ်အထက်သက်တမ်းရှိသော အရည်အသွေးမြင့် စစ်ထုတ်ကိရိယာများ။ (၃)နှစ်မှ (၄)နှစ်သက်တမ်းရှိသော အရည်အသွေးမြင့် RO Membrane Model E2 More functions တစ်နေ့လျှင်ဂါလံ(၃ဝဝ) ထုတ်ပေးနိုင်ခြင်း။ ရေပူ၊ ရေအေး၊ နှင့် ရိုးရိုးရေ (၃) မျိုးရရှိခြင်း။ (၁)နှစ်အထက်သက်တမ်းရှိသော အရည်အသွေးမြင့် စစ်ထုတ်ကိရိယာများ။ (၃)နှစ်မှ (၄)နှစ်သက်တမ်းရှိသော အရည်အသွေးမြင့် RO Membrane
Water Softeners အိမ်များ၊ ဟော်တယ်များ၊ စားသောက်ဆိုင်သုံး ရေသန့်စက်ကြီးများ
&quot;ထူးခြားချက်များ&quot; ပိုက်လိုင်းရေ၊ မြေအောက်ရေနှင့် ဆားငန်ရေများမှ သန့်စင်သောရေကို (၁)နာရီလျှင် (၄ဝဝ)မှ (၂၅၀၀၀)လီတာအထိ ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်ခြင်း။ အိမ်းများ၊ ဟော်တယ်များ၊ အပန်းဖြေနေရာများနှင့် စားသောက်ဆိုင်များအတွက်အထူးသင့်လျှော်ခြင်း။ အနည်အနှစ်များ၊ သံချေးများ၊ ကလိုရင်းများ၊ ဆိုးဝါးသည့်အနံ့အရသာများ၊ ရေစေးခြင်းနှင့် ဆားပါဝင်ခြင်းများကို ဖယ်ရှားပေးခြင်း။အရည်အသွေးမြင့်မားသော FRP (သို့) Composit Resin Tank များမှာ (၂၀) လီတာမှ (၁၇၀၀)လီတာအထိ ဝင်ဆန့်ခြင်း။ သံချေးမတတ်ခြင်း။ ယိုစိမ့်မှုမရှိခြင်းနှင့် သက်တမ်းမှာ (၁၀)နှစ်မှ (၁၅) နှစ်အထိရှိခြင်း။ အလိုအလျှောက် ပြန်လည်အားဖြည့်ခြင်းနှင့် သန့်စင်းစေခြင်းအတွက် Autoနှင့် Manual Valve များ ပါရှိခြင်း။ &quot;1 year&quot; အာမခံပါရှိခြင်း။ Models for sediment removal Filter Media မှာ Anthracite နှင့် ပြုလုပ်ထားခြင်း။ (၁)နာရီလျှင် (၄၀၀)လီတာမှ (၂၅၀၀၀)လီတာ အထိ ထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်း။ Models for stain removal Filter Media မှာ Manganese Greensand နှင့် ပြုလုပ်ထားခြင်း။ (၁)နာရီလျှင် (၄၀၀)လီတာမှ (၂၅၀၀၀)လီတာ အထိ ထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်း။ Models for Clorine, bad taste\_order removal Filter Media မှာ Activated carbon နှင့် ပြုလုပ်ထားခြင်း။ (၁)နာရီလျှင် (၄၀၀)လီတာမှ (၂၅၀၀၀)လီတာ အထိ ထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်း။ Models for Clorine, bad taste/order removal Filter Media မှာ Resin နှင့် ပြုလုပ်ထားခြင်း။ (၁)နာရီလျှင် (၄၀၀)လီတာမှ (၂၅၀၀၀)လီတာ အထိ ထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်း။ Models for hardness removal Filter Media မှာ Mixed resin နှင့် ပြုလုပ်ထားခြင်း။ (၁)နာရီလျှင် (၄၀၀)လီတာမှ (၂၅၀၀၀)လီတာ အထိ ထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်း။
<p>Chloric acid လိုအပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်များအတွက် တင်ပေးလိုက်ပြီနော်။</p><p>လူကြီးမင်းတို့ လိုအပ်တဲ့ Acid တွေရှိရင် လည်းမေးမြန်နိုပါတယ်။</p>
<p>Boiler Water Chemical Treatment</p><p>CAG Engineering has suppliedarange of high-quality boiler water treatment chemicals for Myanmar and Industrial customers. Our chemicals are suitable for Industrial steam boilers. A badly treated steam boiler isapotential bomb, so getting the feed water quality and boiler water chemistry correct is critical and that means using tried and tested boiler water treatment chemicals. A complete water treatment programme forasteam boiler will usually includeachemical oxygen scavenger, alkalinity builder and polymer sludge conditioner and depending on the application, may also incorporateaphosphate treatment andacondensate line treatment. CAG’s tailor design service program for Boiler water chemical treatment are designed and program for each customer requirement as follow.  SCALE AND CORROSION INHABITOR FOR BOILER  BIOCIDE FOR BOILER SYSTEM Products are produced and distributed under the brand ‘WACHEM’ with ISO9001:2008 certification and called ARQUEST and ZERMATE Series.<br></p>
<p>CAG Engineering providesacomplete range of solutions and</p><p>services for treating industrial wastewater to meet process</p><p>needs as well as environmental regulations.</p><p> Our products include filtration, clarifying systems, biological</p><p>treatment, dewatering, disinfection, ion exchange, carbon</p><p>filtration, reverse osmosis, Ozonation and other technologies</p><p>for removing impurities from water.</p><p> We also provide customers with the engineering and</p><p>knowhow that helps them choose the right approach, and</p><p>support our solutions through Myanmar’s Environment</p><p>Service Network.</p><p><br></p><p>Pretreatment Program Implementation</p><p>Types of pretreatment include:</p><p>• pH neutralization</p><p>• Temp regulations</p><p>• Solids separation</p><p>• Toxic metal removal</p><p>• Reducing of BOD/ COD</p><p>• Oil and grease</p><p>• Reducing of Colour</p><p>• Removing Odor</p><p>Industries We Serve</p><p> Chemical Processing</p><p> Food &amp; Beverage Processing</p><p> Hydrocarbon Processing</p><p> Textile Industry</p><p> Metal &amp; Mining</p><p> Battery manufacturing</p><p> Leather tanning finishing</p><p> Pulp/paper mills</p><p> Microelectronics</p><p> Health Care /Hospital</p><p> Pharmaceutical Manufacturing</p><p> Power Plant</p><p> Oil refinerie</p><p>CAG’s best strategies in managing Industrial Waste Waters?</p><p>Physico-chemical treatments</p><p>A coagulation-flocculation process was generally found to be</p><p>unable to remove personal care products</p><p>Adsorption by activated carbons has great potential for the</p><p>removal of trace emerging contaminants</p><p>Biological treatments</p><p>Activated sludge processes</p><p>Membrane biological reactors (MBR)</p><p>Reverse Osmosis (RO)</p><p>Nano filtration (NF)</p><p>Ozone and advanced oxidation processes (AOPs)</p>
Cooling Water Chemical Treatment
<p>Our chemical programs are effectively used for the reduction and prevention of the three major issues that your industrial cooling water system may encounter, corrosion, deposition and microbial growth. Corrosion leads to metal loss that can result in critical system failures in heat exchangers, recirculating water piping and process cooling equipment. Corrosion also results inaloss of efficiency as corrosion products precipitate on heat transfer devices, insulating the metals. Cooling towers are vulnerable toavariety of contaminants that cause deposit formation, such as mineral scales and sludge. Deposition interferes with heat transfer, increases corrosion rates, restricts water flow and causes loss of process efficiency and production. CAG’s tailor design service program for Cooling Water Chemical treatment are designed and program for each customer requirement as follow.  SCALE AND CORROSION FOR COOLING WATER  EVAPORATIVE CONDENSER TREATMENT  BIOCIDE FOR COOLING SYSTEM Products are produced and distributed under the brand ‘WACHEM’ with ISO9001:2008 certification and called ZERGUARD and PHAMINOX series<br></p>
<p>When customers choose to purchase our water treatment products and services, we</p><p>understand what they're really investing in is the service and relationshipaCAG</p><p>Engineering provides.</p><p>That's why we employ the very best field personnel available, with an average of over</p><p>25 years of experience - more than three times the industry average. We approach</p><p>your business asapartnership, providing you with chemical treatment services that</p><p>maximize system efficiency through our outstanding service, high quality products,</p><p>and superior technical expertise.</p><p>Water treatment systems are specifically designed to produce drinking or City water</p><p>that meets today’s WHO standards. The systems use uniquely designed filtration</p><p>modules inahollow fiber configuration to remove the following contaminants from</p><p>surface and groundwater sources such as, Suspended solids/ turbidity , Viruses</p><p>,Bacteria, Cysts and Oocytes , Ecoli, Iron and Manganese, Arsenic, Organics, Etc.</p>
<p>Biological Waste Water Treatment </p><p>• Submerged Fixed Film / Biofilm Reactors </p><p>Package Waste Water treatment system from small to large scale have been designed and manufactured through technical and turn into finished products at our supervision, The package have been integrated the Micro-organism, Bio Chemical and Hydraulic Control all together with compact design, Easy maintenance and Easy installation while keeping performance high. The system is divided into five chambers for solid separation ,equalization, flow control, aerobic bio-filtration and sedimentation.<br></p>
FILTER PRESS FOR SLUDGE DEWATERING WASTE WATER SYSTEM
<p>CAG Engineering Co., Ltd. Supply Automatic filter press which is one of the solid liquid separation machine. CAG engineering has developed for the filtering solution such as Filter Press, Belt Press, Polymer Unit , Filter cloth, Filter Plates for various kind of Industrials. As one of the leader for filtration equipment importer in Myanmar , CAG Engineering has participated in many turnkey plants in Myanmar. We are experienced in solid-liquid separation for various industries such as Starch Industry, Pulp and Paper Industry, Mining Industry, Sugar Industry, Soya bean Sauce Industry, etc.<br></p>
Industrial Chemical Supply
<p>CAG Engineering Co., Ltd. is one of the leading chemical distributor providing business-to-business solutions for users of industrial and specialty chemicals in Myanmar. Having more than 25 years of overseas experiences, we have sourced raw materials from chemical suppliers around the world and marketed them to manufacturers serving key industrial and consumer marketplaces, including agriculture, surface technology, home &amp; personal care, cosmetic, electronic, food processing, oil refinery, pharmaceutical, pulp&amp; paper, rubber glove, paint &amp; coating, printing ink. We areafull-service chemical distributor partner helping our customers meet manufacturing and distribution requirements at all levels of the supply chain. We are supplying Industrial Chemical such as  Basic Chemicals  Corrosion inhibitors  Scale inhibitors  Biocides  De-Foamers  Flocculants  Coagulant<br></p>